Onye na-eji GNU / Linux? | Site na Linux
Onye na-eji GNU / Linux?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Na-atụ aro
Edemede mara mma nke m hụtara na ụmụ mmadụ ebe anakọtara ọtụtụ ozi na-agwa anyị nkuku ụwa ọ na-eji GNU / Linux. Ana m ekwupụta na ụfọdụ ụfọdụ amaghị m.
O juru m anya na Cuba bụ otu n'ime mba ndị nwere mmasị na nkesa GNU / Linux. o_O
Ka anyị hụ otu ntakịrị ihe dị mkpa Linux nwere taa nwere ụfọdụ ihe atụ banyere ojiji ya:
Sistemụ njikwa de okporo ụzọ: Ọtụtụ obodo ndị dị n'ụwa na-adabere na GNU / Linux iji jikwaa ọrụ njikwa okporo ụzọ ha. New York, San Francisco na Los Angeles bụ ụfọdụ n'ime ha.
Flegbọ okpuru mmiriNuklia s nke US Navy:'Sgbọ okpuru mmiri nuklia nke America, ụfọdụ ndị toro eto ma na-egbu egbu n'ụwa, na-eji distrohie dị na Red Hat na-achịkwa usoro niile dị n'ụgbọ mmiri. Nwere ike iche n'echiche BSOD na omimi nke mita 500? Mụ onwe m ga-ekpebi Linux ...
CERN: Igwe kachasị ukwuu ma dị oke ọnụ nke mmadụ wuru, bụ Large Hadron Collider, na-eji GNU / Linux, dịka ndị niile dabere na CERN. A na-ekerịta nsonaazụ nke nnwale ahụ n'etiti ndị sayensị site na iji netwọkụ ekesara nke gbakwunyere na GNU / Linux. CERN bu ebe amuru na isi ojiji nke Scientific Linux, nkesa Red Hat diri ndi nwoke na ndi nwanyi sayensi.
Japanesegbọ okporo ígwè ndị Japan: Usoro ụgbọ okporo ígwè kachasị n'oge na ụwa na-adabere na GNU / Linux iji rute n'oge. N’agbata Tokyo na Osaka, obodo abụọ kachasị buo ibu na Japan, ụgbọ oloko na-agba minit atọ ọ bụla n’akụkụ ọ bụla. Kwa afọ, Shinkansen (aha ndị Japan maka ụgbọ oloko) na-ebu ihe karịrị ndị njem 3 nde kwa afọ, na ọsọ kachasị nke 151 km / h.
Mgbanwe Ahịa Ahịa New York na London: NYSE (New York Stock Exchange) bụ mgbanwe na-arụsi ọrụ ike na mbara ala, ebe a na-azụ ma na-ere ihe karịrị ijeri dollar 150 kwa ụbọchị. Ngwunye akụrụngwa ya na-agba ọsọ n'okpuru Red Hat Enterprise Linux. LSE (London Stock Exchange) gbasoro nzọụkwụ nke NYSE n'iji Novell SUSE Enterprise Linux mgbe sistemụ ya gara aga dabere na Windows Server 2003 na. na ya. Nsonaazụ Mbugharị a bụ usoro kwụsiri ike ma dịkwa ọsọ ọsọ karịa nke ndị niile na-asọmpi ya.
Nchịkwa ụgbọelu nke United States: FAA, maka acronym ya na Bekee, na-ahụ maka inyocha ọ bụghị naanị njem ụgbọ elu US, kamakwa ọrụ njikwa ụgbọelu ndị ọzọ niile. Na 2006, ha mere njem zuru ezu na Red Hat Enterprise Linux.
Amazon: Storelọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị ukwuu n'ụwa abụghị naanị iji GNU / Linux iji jikwaa arụmọrụ ya, mana ha mepụtara nke ha distro, Amazon Linux, dabere na Red Hat Enterprise Linux. Amazon aghọwokwa onye ndu ụwa n'ọhịa igwe ojii, yana Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) nke na-eji Linux agbadoro usoro Xen dị n'okpuru.
Google: Ọzọ ibu nke netwọk na mepụtara ya distro, Goobuntu, nke bụ ukwuu n'ime a na akpụkpọ na-etinyere na ọhụrụ LTS mbipute nke Ubuntu. Google jiri GNU / Linux ma na ọdụ ya yana sava ya. Nke ikpeazụ na-agba ọsọ pụrụ iche nke kachasị mma maka njin ọchụchọ gị yana ọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye.
Facebook: Facebook nyefere data nke ihe karịrị 1.000 ijeri ndị ọrụ na sava na-agba ọsọ na ụdị nke CentOS 5.2 gbanwere. Ihe (ọ bụghị) ihe dị ịtụnanya bụ na akụrụngwa ya niile (Open Compute Platform) gosipụtara ya n'okpuru ụkpụrụ Red Hat.
Twitter: Twitter bụ onye otu Linux Foundation, ya iri puku kwuru puku sava na-agba Linux na ọtụtụ ndị ọzọ free teknụzụ na ha nwere ekele maka ikike ịgbanwe ha na uche ka mma imeghari ha ka ha mkpa.
Virgin America: Ugbo elu ụgbọ ala kachasị dị ala nke North America na-eji ụdị mmegharị Red Hat na Fedora maka usoro ntụrụndụ ya.
Toyota: Toyota abụwo otu n'ime ụlọ ọrụ ikpeazụ iji bụrụ Gold Gold nke Linux Foundation, na-egosi nkwado ya niile maka obodo ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ ma na-emeghe. Todị Toyota ndị ọhụrụ jiri GNU / Linux iji jikwaa usoro ntụrụndụ na ozi ha. Usoro nchịkwa na netwọk nke ụlọ ọrụ na-adaberekwa na GNU / Linux ịrụ ọrụ.
drones: United States Army kwadoro ọtụtụ UAV dịka MQ - 1 Predator na GNU / Linux. Ihe kpatara ya: Usoro ha nwere (Windows XP) dara site na nje dị na MQ-9 Reaper, nke kpatara mwepụ nke ọtụtụ n'ime drones ndị a. United States Air Force, Royal Air Force nke England na ndị agha Aeronautics nke usedtali na-eji Predator eme ihe. Ọ bụ ezie na ọ ga-efefe ebe dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ijikọ ụta ọkụ ọkụ ọkụ abụọ, nke na-eme ka mmiri a bụrụ ngwa ọgụ.
Ngwa ekwentị: Anyị nwere ike iburu ya na ekwentị ma ọ bụ na mbadamba. Maka ndị a, e nwere onye na - achị achị na mpaghara a: Android. Dabere na Linux kernel, nke Android Inc. mepụtara wee zụta ya na 2005 nke Google, ọ ghọọla otu n'ime sistemụ arụmọrụ kacha mkpa taa. Ngwaọrụ nke akara niile dịka Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC, Coby Kyros na ọtụtụ ndị ọzọ na-eji sistemụ arụmọrụ nke Google na Open Handset Alliance mepụtara, na-ebute ọtụtụ ngwaọrụ na ngwaọrụ.
Fbi: Ndị FBI kwagara Linux na 2002 n'ihi na ọ bụ sistemụ echedoro nke nwere ike ijikwa data buru ibu, ọ na-ejikwa Linux n'ihi na ọ dị mfe nledo na kọmputa ndị ọzọ site na sistemụ arụmọrụ a ma jikwaa netwọk nke ozi nzuzo.
Wikipedia: Wikimedia Foundation nwere ndị sava ya na-agba ọsọ sistemụ arụmọrụ Gnu / Linux, mana na 2008 sava ya sitere na RedHat na Fedora na-achịkwa ya, na-achịkwa Ubuntu Server.
91% nke ndị supercomputers ụwa: N'ime kọmputa 500 kachasị ike n'ụwa 455 na-eji sistemụ arụmọrụ sitere na ezinụlọ GNU / Linux.
Houselọ White HouseMgbe mwakpo mwakpo na 2012 site na kọmputa ndị nje nje gburugburu ụwa na Code Red worm, a kpaliri ebe nrụọrụ White House na onye ọbịa nwere nchebe ka mma megide mwakpo DDoS ma ha wepụtara ohere ịkwaga site na Solaris OS ha nke ochie gaa Red Hat Enterprise Linux .
Bing (nke Microsoft): Ọ dị egwu, mana ọ bụ eziokwu, ihe nchọgharị Bing nwere sava ya na Linux. Kwenye onwe gị: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com
Ọtụtụ mba na-eji GNU / Linux na nchịkwa ọha na mpaghara azụmaahịa: N'ụwa niile, mmasị na Linux kachasị ukwuu na India, Cuba na Russia, Czech Republic na Indonesia. Mba Western nke mbụ na-apụta na nhoputa a bụ Germany na ebe nke iri. Na United States, ọkwa kachasị ewu ewu na steeti California na nke a kwere nghọta, na-eche na ọ bụ ụlọ Silicon Valley, ebe nnukwu ụlọ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ ngwanrọ n’ozuzu ha. Ka anyị lee n'ime mba ndị kesaa nkesa 8 kachasị ewu ewu:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Ubuntu bụ:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na OpenSUSE bụ:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Fedora bụ:
4 Aha ya bụ Nepal
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Debian bụ:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Red Hat bụ:
2 Aha ya bụ Nepal
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Mandriva bụ:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Slackware bụ:
Mba ndị nwere nnukwu mmasị na Gentoo bụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Onye na-eji GNU / Linux?
Ihe 124 kwuru, hapụ nke gị
Na Spain anaghị apụ apụ ebe ọ bụla, ọ dị, ogologo ndụ ndị ehi xdd
SAludos anya n'isiokwu a ha na-akọwa otú free software na-aga ke Spain 🙂 .. http://is.gd/NyqJa0
Zaghachi ka lovell
pandev anyị na-aga ike ke Spain na "manolete Gnu / Linux" a distro lekwasịrị anya na mmụọ nsọ site na ụwa nke bullfighting, iji hụ ma Linux sneaks e hehehe
HAHhahahahaa, gaa mara XD, nwekwara Gnu / Belen distro, nwere ike ije ozi ahahahaa
Aghọtaghị m ihe egwuregwu GNU / Belén.
Belen Echere m na ha ga na-ezo aka Belén Esteban, atụle adaeze nke obodo, na ya naanị kpọkwara bụ ka enwetatụbeghị aka a bullfighter na-atụrụ ime… ..
Zaghachi ka thanatos
You chetara m nke ahụ Belén, ebe ọ bụ na Peru a maara ya karịa ihe ọ bụla n'ihi na akụkọ a kwenyere na otu ụlọ ọrụ ngosi ngosi a na-akpọ Sofía Franco na-esoro di ya na-akpakọrịta, n'ihi ya kwa, o chere ndị na-ekiri ya ihu nke ukwuu. ihu nke mkparị dị otú ahụ ma ọ dịkarịa ala ebe a na-agba ịnyịnya ndị a ma ama ama amaala ọtụtụ ihe n'ihi nke a.
PS: Ọ bụrụ na onye ọzọ bụ onye Peruvian ma na-agụ ihe a, biko agbaghala Belén Esteban na Belén Estévez ndị bụcha ụmụ nwanyị abụọ.
Amaghị m otú ha si depụta ndepụta nke mba mana mmasị ahụ adịghị akọwapụta nke ọma. Na Spain a na-eji GNU / Linux eme ihe ọtụtụ (naanị ị ga-eleba anya na okporo ụzọ anyị na-ewepụta).
Ọ bụ eziokwu ma ugbu a, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-efu na-eji Linux ma ọ bụ ụfọdụ linux ma n'ezie Cuba na Venezuela pụtara dịka mba ndị kachasị kwalite iji ngwanrọ n'efu na Latin America. ihe atụ Linux na mobile ngwaọrụ http://is.gd/qKJc9q
Na isi nke atọ, gịnị kpatara na ewepu Fermilab? ; _;
Point 13, thismmm ya na XP aiki? O_O
Diossssssss, na ụfọdụ na-ekwu na anyị enweghị nchekwa, n'ihi na a ga-enwerịrị ọtụtụ XP n'ebe ahụ ka ... anyị ga-egbu onwe anyị naanị, ị ga-ahụ 😀
Pff otu m na-ekwu. Drones with xp wasnye bụ ọgụgụ isi nke bịara na nke ahụ?
Otu ngalaba dị oke mkpa na-efu na ebe Linux bụ vetiran: ụlọ ọrụ ihe nkiri.
Ugbua na Titanic (1998) kọmputa kọmputa ka ejiri mee ihe pụrụ iche (ịghara ịkpọ Avatar). Pixar na ụlọ ọrụ mmepụta niile bụ isi na-eji sava Linux hazie nrụpụta niile.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nanị mmemme Autodesk nke akwadoro na Linux bụ Maya, nke bụ maka mmegharị.
jesus israel perales Martin dijo
Mexico anaghị apụta ebe ọ bụla: c
ndu tequila dụ !! 😛
Nzaghachi jesus israel perales martinez
hahaha, echere m na na Mexico ha na-eji ya ọtụtụ .. Achọpụtara m na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-eji Linux bụ ndị Mexico.
Na-ebi tacos! Up na loggerheads!
Enwere m mmechuihu na m gaghị ahụ Mexico na chaatị: /
Maka nke a, a na m akwado iji GNU / Linux n’etiti ndị ezi na ụlọ.
Zaghachi Antonio Galloso
N'ụlọ m ha na-eji elementrịOs 😀
Zọ kachasị mma iji 'ere' linux bụ ịsị na ị nweghị ihe egwu malware na desktọọpụ gị. Otu enyi facu wụnye ya ka ọ nwee ike ile porn dị jụụ na-enweghị kọmputa na-enweta nje XD
HAHAHAHA ° w °
Ekwere m na m na-ejikwa Linux ele porn (ọ dị nchebe karịa Windows). #Akwado
Ihe anyi biala ndi nwem !! xD
I nwekwara mmesi obi ike na sistemụ gị agaghị ajụ oyi ma ọ dịkarịa ala (ma ọ bụrụ na ị maara ihe m na-ekwu).
ooooooo, mụ onwe m, hahaha, ekwere m ma wụnye Fedora nna m na 60 afọ n'azụ ya.
Enweghị m ike ịkwụsị ịchị ọchị na isi 19 xD
Aga m ekwu nke a:
+++ Maka ndị BSD na-ele ya na TV !!! +++
N'ihe banyere bing, ọ dabere na otu mmadụ si achọ ya, ọ na-aga na Linux ma ọ bụ windo sava
Ọ bụrụ na ile anya http://www.bing.com, jiri Linux
Mana ọ bụrụ n’ịchọ bing.com, ị ga-ewere anwansi gaa na sava Windows
Onwere onye mara ihe kpatara ya?
N Microsoftihi na Microsoft na-eji Akamai eme ihe ozugbo iji bulie peeji nke Internetntanetị na-eji Windows Server ọsọ. Kedu ihe ọzọ, ihe nkesa na-adịghị mma nwere opekata mpe CentOS 6.4 iji nye ndị sava ya aka.
Ọ dị m iche na Russia pụtara na ndepụta niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndepụta niile nke elu 5. Ọ bụ ihe kwere nghọta ebe ọ bụ na ọ na-akwụ ụgwọ na ọtụtụ ndị bi na ya, nke anaghị m ahụ China ọ bụla. WINDOWS na-akwado Linux, hahaha.jikọ ọnụ ụzọ ámá ada na-eji ya :)
Nke "mba nwere oke mmasị" ga-abụ site na pasent, echeghị m na ọnụọgụ ndị mmadụ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme. Y'oburu na onu ogugu ndi mmadu, China nke nwere "mba" Ubuntu ga adi elu n'elu chaatị.
Lelee ezigbo akụkọ Netcraft. Microsoft anaghị eji Linux na Bing. Akamai na-eji ya bụ CDN ha butere. N'ezie, Microsoft abụghị onye nwe sava ahụ.
Zaghachi iji rịba ama
Ee, mana ha “nwere obi uto” n'iji ya, opekata mpe na ndabara.
Ma Microsoft na-ejikwa igwe arụmọrụ (nke na-abụghị Xen, VMWare ma ọ bụ Ndekota) n'ime sava ndị ahụ, ọtụtụ oge, mgbe ị na-eji Netcraft, ọ na-egosi na ọ na-eji Windows Server 2003.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji Linux, ị na-eji ya (yana Apple na sava ha).
Ọ dị oke njọ, obodo ndị Hispanic na-eme nke ọma na akụkọ a.
Ekele dịrị ndị Cuba, ekele ha nwere anyị nnọchiteanya. Echere m na nke ahụ agbanweghị ...
Ọ ga-amasị m ịmara etu Cuba siri dị elu na karịa karịa Germany ma ọ bụ United States, n'eziokwu gringos apụtaghị na Top 5 ọ bụla.
Echere m na "mkpa" na "ọgụgụ isi" bụ igodo.
Amaghị m ihe ị bu n'uche na adjective ndị ahụ.
Germany bu ala ebe Linux Linux, na KDE. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị na ndị kansụl obodo niile akwagala na Linux.
N'ihe banyere US, ọ bụrụ na ị lelee ndepụta ha depụtara, ọtụtụ n'ime ha si mba ahụ, ụlọ ọrụ ha kachasị mkpa (nchekwa, ọgụgụ isi, aerospace) nọ na Linux.
Na mkpokọta, enwere ihe abụọ iji jiri GNULinux.
Nke mbu bu "mkpa". Eziokwu nke inwere onwe na-emetụta mba ebe ike ịzụta adịghị mma.
Nke abụọ bụ "ọgụgụ isi." GNU / Linux bụ usoro nke oge a, nke ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma. Yabụ, ọ baghị uru ịkwụ ụgwọ maka sistemu ikike, inwe nhọrọ dịka GNU / Linux.
Enwere m olileanya na nkọwa ahụ zuru.
Consider na-atụle pasent nke ndị bi na ịntanetị ebe ahụ?
Ugbu a ka m ghọtara ihe kpatara google ji bụrụ nzuzu haha.
Oke uhie uhie na SUSE distros.
Mana ihe atụ niile ahụ bụ akụkụ sava.
Gini kwa maka desktọọpụ na Linux, ahh?
Zaghachi na Windowsero
Ubuntu bụ otu n'ime ikpe, na mgbakwunye na 1% nke ndị ọrụ desktọọpụ dị ka "nyocha" ahụ si bụrụ aghụghọ, ebe ọ bụ na a naghị agụta ndị ọrụ n'ezie n'onwe ha, mana PC ndị etinyegoro na sistemụ arụmọrụ. . Akaebe nke nke a bụ n’isiokwu a >> https://blog.desdelinux.net/debunking-the-1-percent-myth-traducido-al-espanol/
Agbanyeghị, Linux emeela ọtụtụ ihe na desktọọpụ kemgbe Ubuntu bịara ụwa.
Naanị cheta na maka mgbakọ na mwepụ, 1% nke afọ 2004! = 1% nke afọ 2013, linux na-abawanye, nsogbu bụ na ndị na-ahụ maka kọmputa ụwa na-abawanye.
Ee, mana n'ihe gbasara ngwaọrụ mkpanaka na / ma ọ bụ PC nke akara aka, ọtụtụ ga-anọrịrị na Linux distro dị ka Slackware, Debian na Xfce / Lxde na / ma ọ bụ Arch na GUI ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Ọ dị mma maka ndị Cuba !! na-enye Debian nnochite anya ya!
Ọ bụ ihe!
Venezuela na Argentina apụtaghị, n'ihi na anyị nwere gọọmentị abụọ, site n'aka ekpe ebe ọ bụla ị lere ha anya, anyị bụ ndị ohu na mba nke anyị, edobere anyị. Iswa megidere atumatu anyị ma ọ bụ karịa "ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị" anyị.
ị na-etinye aka ekpe dị ka ihe na-adịghị mma, mana ọ bụrụ na gọọmentị ndị ahụ dị ka "ajọ" dịka ị chere, mgbe ahụ ha anaghị ahapụ n'ezie.
O buru na edobere gi, I gha abia ebe a nwalee iru ndi na achi anyi
Zaghachi na alberto
Amaghị m obodo ị bi ma ugbu a enweghị m ike ịchọta ọchịchị aka ike ọ bụla n'ụwa, belụsọ na mba ndị Arab.
Spain, Hungary, United States ... ọ dịghị ...
Hala Alberto, mee ya ka ọ na-ele anya. Ebe obu na obi adighi gi nma na Spain ma ya bu na “ndi” na-emegbu emegbu o gha adiri gi nma ka gi na Willy Toledo gaa Cuba, nihi na odi f ... nne. Ma ọ bụ na Venezuela (ee, were akwụkwọ mposi).
Kedu otu isi si dị n'ụwa ... ma ọ bụ onye nzuzu, onye maara.
Ehem ehem xDDD. Kwụsị ị drinkingụ n'abalị, na Spain enweghị gọọmentị facade, mana ndị dị ka gị gaara achụpụla ha na mba xD. Ka onye na - eduga ndị ntorobịa pp na - ekwu.
United States abụghị facades, ha bụ ndị isi ike, ndị Democrats abụghị facades.
Hungary enweghị echiche.
nọ gị ebe ahụ. Echere m na ebe ọ bụ na ha ga-anọ n'ọchịchị ihe na-erughị afọ abụọ, ha agaghị enwe oge iji weghachi ihe niile site na ọchịchị aka ike, mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-enwerịrị ya na agụmakwụkwọ, agụmakwụkwọ okpukpe a manyere.
Ee, ndị na-achị achị bụ façades, ọ kabeghị steeti fascist mana nke ahụ apụtaghị na imirikiti bụ, yana nke opus.
Amaghị m willy toledo ma ọ bụrụ na oke mmiri na-emebi ihe na-eme ka ihe kpatara ya na abc drool mgbe ahụ ihe dị mma ga-abụ.
Cuba abụghị gọọmentị aka ekpe.
"Ee, n'ezie, na Cuba ha enweghị gọọmentị aka ekpe ma ọ bụ ya mere ha ji nọrọ n'ọkwa ... Na-agbasa ozi ọma, ha na-agwa m na Cuba nwere gọọmentị aka ekpe, nke a anụtụbeghị!"
Zaghachi Wilbert Isaac
Aghọtaghị m gị. Ọchịchị mkpagbu ọ bụla site na nkọwa adịghị n'aka ekpe. Amaara m ndị Cuba ma ha enweghị nnwere onwe. Enwere ihe ndị mara ezigbo mma na Cuba mana ndị ọzọ abụghị.
Ndị na-achị achị bụ akụ na ụba na agha, dịka ebe ọ bụla.
O doro anya na ọ ga-adị mkpa iji chọpụta ókè USA dị mma ma ọ bụ ka njọ karịa Cuba, mana nke ahụ bụ ajụjụ ọzọ.
Isi okwu m bụ na ọ nweghị ọchịchị aka ike fọdụrụ n'ezie.
Kpọmkwem, dị ka gọọmentị nke ugbu a nke Argentna, ebe enwere ọchịchị aka ike nke a na-eme ka ọ bụrụ aka ekpe - mgbe a na-eme ya, ha bụ ndị ama ama dịka ndị agha na onye ọ bụla na-anaghị ahụ anya na nkwenye ha kpamkpam.
Kedu otu iju, Venezuela na Argentina adịghị na map ... gịnị kpatara ya? Venezuela nwere distro nke na-ekesa Canaima maka PC na netbooks (dabere na Debian) na peeji sọftụwia na - akwụghị ụgwọ site na ebe ị nwere ike ibudata dị nro.
Argentina nwere atụmatụ netbook nke ruru puku atọ na narị ise na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ netwọ 3.500.000 ka agafeela n'ụlọ akwụkwọ.A na-akpọ distro nke Argentina Huayra (Dabere na Debian) nke pụtara na Quechua pụtara "ifufe", na mgbakwunye na otu nnọkọ, na dịka Canaima peeji nke na Facebook . I nwekwara ike ịhụ mmasị na ịwụnye Huayra na PC nkeonwe.
Abụ m onye Argentine, ana m agwa gị na nke abụọ distro ị na-ekwu, m na-ahọrọ canaima, ọ na-ewekwu oge iji zụlite. Nke anyị huayra nwere ọtụtụ ụzọ ọ ga-aga ma nwekwaa ọtụtụ chinchi. Banyere netbook, ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ nke mba m, ha na-eji netbook na-agagharị ma na-amụtaghị ihe ọ bụla, nke mbụ ị ga-akụziri ha ka ha jiri isi ha mee ihe. lee otu esi etinye ihe omuma na igwe. Iwu dị oke egwu na ARGENTINA.
Atụmatụ mba ị na-ezo aka bụ ihe efu, na Argentina anyị na-eme "ịnyịnya ibu" kama ndị mmadụ, atụmatụ netbook bụ naanị iji merie votu, anaghị eji ya akụzi.
Ọfọn, PEDRO na JUAN, egbula m, che… .okwu bụ na ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nde Netbooks kesara, ọ bụrụ na ntọala bụ Debian, ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na Argentina kemgbe 2000 na Ututo distro na-emepe emepe, na Via Libre Foundation na-abịa ime ụlọ akwụkwọ na Argentine Pirate Party sokwa na-akwalite GNU / Linux. Ọ dị mwute ịhụ na Argentina apụtaghị. Ekwenyere m na gị banyere iji netbooks, na ngwụsị izu ọbụna square nke obodo m ebe free WiFi jupụtara netbooks… .. akparị ụka. Anyị bụ ndị Argentines dị umengwụ maka usoro mmụta Linux….?
OpenDNS na-eji Linux, enwerekwa ụfọdụ sava linux maka mmelite windo.
ucha, na nso nso a o nyere patatus otutu n'ihi na n'ime egbe gnu / linux ka etinyere
O doro anya na Facebbok na Twitter na-eji ya eme ihe, dị nnọọ njọ, na-ekpe ikpe site ugboro ole hacked ha.
Facebook na-eji CentOS 5.2 (otu oge ochie sava ha si) na Twitter na-eji Ruby na Rails dị ka asụsụ mmemme maka sistemụ ha (ya mere kpatara ya). Enwekwu ntụsara ahụ bụ identi.ca, nke dị mma karịa Twitter.
Identi.ca na-agagharị na Pump.io, maka 8 nke ọnwa a ka mgbanwe a kwụsịrị, anyị ga-ahụ ihe na-eme, enwere m akaụntụ ebe ahụ na dịka ndị nchịkwa si kwuo, a ga-akpali anyị niile, na-echekwa otu na ndị anyị na-eso. M dokwuo anya na enweghị m echiche dị iche banyere ihe Pump.io dị.
Daalụ nke ukwuu maka n'ọnụ. Enwere m olileanya na saịtị a dị mma karịa identi.ca.
hahaha Microsoft xDDDD nke troll. Ezigbo ihe na 19 xD
Zaghachi na SaPpHiRe_GD
Amaara m na Microsoft jiri Linux (ma ọ kachasị CentOS). Apple na-ejikwa ya (na iche na ha jiri OpenBSD kama OSX).
Mexico apụtaghị kwa, mana agbanyeghị.
Ọ bụ ejiji maka ndị editọ iji osx XD?
Enweghị m ego iji zụta MacBook ma ọ bụ ọbụna iMac, mana m ga-achọ ịhụ ihe atụmatụ sistemụ arụmọrụ gị nwere na m ga-achọ ịme mmemme na XCode, nke dị ezigbo enyi ma jiri C ++ dị ka asụsụ mmemme ya.
Ka o sina dị, a na-ahụ na usoro Cupertino nwere swiiti anya dị mma n'agbanyeghị kernel ya na-adịghị ike dịka NT.
enwere ike xD
Yabụ na asịkwala na obodo gị anaghị apụta HAHAHAHA, n'ihi na ị naghị enyere ya aka pụta ma XD
Biputa uru nke Linux site na sistemụ arụmọrụ mac, nke ahụ yiri m ihu abụọ
Ugbu a, ana m anwale Mageia 3; ọ na-agba ọsọ nke ọma na PC m pere mpe, nke abụghị ọgbọ ọhụụ. Ruo oge ụfọdụ ahọrọlarị m nkesa GNU / LINUX na sistemụ windo. Ekele dịrị ndị niile na-eme nhọrọ a.
Zaghachi to hernando sanchez
Red Hat Enterprise Linux na-enweta ọtụtụ OO
ọ dị oke ike ọ bụ nnukwu disro ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla jiri ya
Zaghachi ka ldd
You na-ekwu okwu na sava?
On gharazie ịba uru sava na / ma ọ bụ PC si, ee; Na PC dị ugbu a, enwere m obi abụọ nke ukwuu, ebe ọ bụ na ngwa ya ga-atụ onye ọrụ PC ọ bụla masịrị iji nke kachasị ọhụrụ anya ma ọ bụrụ na ọ maghị tinye mgbakwunye akwụkwọ akụkọ.
N'ihe banyere ịkwaga na nsụgharị ọhụrụ, ndị na-adabere na ya nwere ike imebi, mana a na-atụ anya na RHEL / CentOS ga-edozi nnukwu ahụhụ ahụ ha nwere.
Mmasị bụ otu ihe wee bụrụ eziokwu. Onu ogugu di na Cuba di ala karie na mba ndi ozo, obu ezie na ha bu ndi ochichi n’ihi na ha kwesiri ka GNU / Linux nwekwuo
M hapụrụ inux mgbe otu afọ na-achọ distro na desktọọpụ dịka ihe m chọrọ, anaghị m emezu ihe m tụrụ anya ya, tụmadị mgbe ọ bịara n’ebe ndị ọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị nọ. The kacha mma Debian distro, ma dị ka ndị ọzọ niile, ị mgbe niile ga-wụnye arụkọ faịlụ ka ihe niile na-arụ ọrụ dị ka ị chọrọ, ọ bụ nnọọ tedious. M na-anọ na windo 8, ihe niile dị mfe ịhazi. Olileanya, site na ebe a na mmadụ na-eme Linux distro na ihe niile onye ọrụ chọrọ, na-enweghị ịgagharị na ya.
Aghọtaghị ihe ị na-ekwu site na "Ọ dịghị mgbe m mezuru atụmanya m, ọkachasị gbasara ndị ọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị", njikwa ndị ọrụ? Ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị? SAMBA?
"Olileanya, site ugbu a gaa n'ihu na mmadụ na-eme Linux distro na ihe niile onye ọrụ chọrọ, na-enweghị ịgagharị na ya." Ọ na-egosi na ịnwalebeghị mfe distros dị ka Ubuntu ma ọ bụ Linux Mint, na windo ị naghị etinye codec? Ihe ọkpụkpọ Flash? Java?, Don'tghọtaghị, kpọrọ ihe.
M na-eji CD dị ndụ site na Dyne: bolic a distro nke na-enweghị ihe karịrị 2 gigs na ihe niile na-arụ ọrụ, IceCat dị ka ihe nchọgharị, Gimp, Inkspace, Cinelerra, enwere m nsogbu na ọdịyo n'ihi na ọ na-eji JACK B IS KWESPLR AND NA ỌKA ỌZỌ, ọ na-eweta PGP, Tor, m na-amụta nke nta nke nta otu esi eji ya mana enweghị ike ịwụnye ya, aga m ahọrọ Debian ma ọ bụ Open Suse. Mana sọftụwia ahụ dị mma ma ọ naghị enye nsogbu ma abụ m neophyte zuru oke.
N'ezie, na windo, ọ dịghị agwụ ike ịnwụnye mmemme niile dị mkpa maka ihe niile iji rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na winzip, ngwaọrụ daemon, winamp, budata kodeks, wụnye Adobe, Java, antivirus, firewall , antispyware, ndị ọkwọ ụgbọala nke kaadị ọhụrụ ahụ, NET, na ọtụtụ malwre na enwere windo ndị na-akpali gị ịtinye ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ.
Anọ m na Linux, ọ dị mfe ịhazi ya na ngwa-enweta. Olileanya, site ugbu a gaa n'ihu na mmadụ na-eme windo distro na ihe ọ bụla onye ọrụ chọrọ, na-enweghị ịgagharị na ya.
Maka nke a, m nwere ike ikwu Mageia3 (ọ bịara izu ole na ole gara aga), dị mfe ịwụnye, dị mfe iji, ha mesie nkwụsi ike na onye ọrụ njedebe, dịka Mandrake / Mandriva mere. Mageia bụ ndụdụ nke Mandrake / Mandriva ma bụrụ obodo 100%. A ga - enwe distros ndị ọzọ maka ndị ọrụ njedebe, ana m akwado onye a dị mma.
oké mmiri ozuzo.nke.theli dijo
Ha chefuru ikwuputa Hollywood.
Zaghachi iji stormrider.of.theli
Enwerem ebe ozo ebe ha bi Linux ma ahuru m ya n’onwe ya. Esi m na Concepción - Chile, ma lee ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ngwongwo ngwongwo akpọrọ «buses Bio-bío», ha ka na-eji Fedora na gnome 2.30 !!!! Mgbe m gara zụta tiketi, achọpụtara m na ha ji Fedora eme ihe, na mmemme ire ahịa na izipụ ihe si na ọnụ ya pụta !!! na enweghị m ike ịjụ ịjụ ihe kpatara ha ji rụọ sistemụ xd ahụ ... nwanyị ahụ na-ere ahịa gwara m na windo na-ada oge niile, na ha kpebiri na fedora n'ihi ọnụ na mma. Agwara m ya, echere m na sistemụ kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma, nke ọ zara, ọ bụ mgbanwe na mberede, ha zụrụ ndị ọrụ niile, mana ọ bara uru n'ihi na anyị maara ụwa ọzọ, dị ọhụụ, ụlọ ọrụ ahụ dịkwa karia na m kwenyere na mmemme a ... .. nke ọma, nke ahụ ga-abụ onyinye m .. xd
Ọfọn, ugbu a ọtụtụ mba na-eji ihe ọ bụla Linux distro ... oke njọ ebe a na Mexico, anyị nọ na ihe otiti ** banyere nke ahụ, ebe ọ bụla ị na-aga ị ga-ahụ Windows, na ụlọ akwụkwọ, na cyber, wdg ... na mba m maara ihe kpatara ya, mana mgbe ụfọdụ, monotony ahụ na-akpasu iwe, m dịka ọmụmaatụ oge ọ bụla m gara cyber, amalitere m ndụ Live USB na wifislax ma ọ bụ azụghachi azụ ... na m na-elekọta wepụ igodo ahụ na cyber ma gbuo mmadụ na mberede. kọmputa, na nanị ikiri ụkwụ Achilles ya. Mana hey, ụfọdụ ga-achọpụta na Linux dị 999 ugboro karịa M $ ma ọ bụ ọbụlagodi OS X, n'ihi na Linux bụ naanị sistemụ ebe ịnwere opekata mpe 99.9% na sistemụ ahụ na-eme ihe ịchọrọ n'ezie.
Ogologo ndụ Linux !!!
Zaghachi na blackwarrior
Jiri Arch ma ọ bụ Chakra, nke na-ewetara gị oge kachasị ọhụrụ.
Kedu ihe nwute na ọ na-eji na drones
Enweghị m ike ikwenye na Bing na-agba Linux !! Ọ bụ ahịhịa ikpeazụ hahaha
Zaghachi na Linuxito
N’ile anya n’elu 10, ụlọ ọrụ kacha ibu n’ụwa jiri GNU / Linux. Ọ bụ ihe nwute na-egbu oge anyị nwere ebe a na Argentina, ebe ị na-abịa gafee a Mmepụta na taa ha na-agwa gị na ị nwere ike ghara inwe ego na free software, aru!
Argentina apụtaghị, lee ihe nwute n'ihi na enwere ọrụ na-atọ ụtọ dị ka nke Tuquito.
igwe nile me ka ochie http://www.loteriasyapuestas.es Ha na-ejikwa linux, n'agbanyeghị, ọ ga-adị ezigbo mma ịchọpụta ihe algorithm nke igwe na-eji eme ntanye akpaka, tux nwere ike ime gị nde mmadụ
Kedu ihe ịtụnanya na Cuba jiri Linux? Ọ ga-eju m anya n'ụzọ ọzọ ma m hụ ndị Cuba na-akwụ ụgwọ Yankee ọtụtụ mba maka iji Mocosoft….
Zaghachi na paco
Aha (chọrọ) dijo
Olee otú na-akpa ọchị. Ọ na-ekwu "na nke nkuku nke ụwa ..." na-ezo aka kasị eji sistemụ na ụwa.
Zaghachi Aha [Achọrọ]
Ọ bụghị n'efu, mana CERN bụ ụgha! (Nkebi)
Na CERN ndị ọrụ na-ejikarị windo (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu). Ọ bụ eziokwu na sava nke njikwa dị iche iche, ịnweta na usoro nyocha sayensị bụ linux. Ma a na-eji windo eme ihe kwa ụbọchị, ngwaahịa ndị a na-ejikarị na ngwaahịa dị mkpa bụ ụlọ ọrụ zuru ezu (gụnyere oru ngo) na nkekọrịta, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị ịchọgharị obere ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ. Ana m ewepụta ndepụta niile nke sọftụwia imepụta, CATIA, ANSYS, COMSOL, wdg.
M na-ekwu nke a na-ama m, ana m arụ ọrụ na CERN.
IBM na-ejikwa ya na laptọọpụ na desktọọpụ. N'inwe afọ ojuju n'etiti ndị ọrụ ya.
Jordi ekele dijo
International Space Station (ISS) na-ejikwa Linux.
Zaghachi Jordi val
«Bing (site na Microsoft): Ọ dị egwu, mana ọ bụ eziokwu, ihe nchọgharị Bing nwere sava ya na Linux. Kwenye onwe gị: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com»
Biko, Akamai bụ ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ, nke nwere ọtụtụ ndị ahịa n'ihi na o nwere sava ya kesara ụwa niile na nke na-eme ka nchedo DDoS dị mfe, ebe ọ na-eji Round Robin DNS na sava ya, na-eme ka ọgụ sie ike.
Na-ekwu na Microsoft na-eji GNU / Linux bụ ihe na-egosi na nke a abụghị ikpe, ebe ị nwere ike ịnwe GNU / Linux n'ihu Microsoft Servers gị.
N'ikwu okwu ahụ ọ na-esiri m ike ikwere ọtụtụ ndị ọzọ dịka ọmụmaatụ:
"FBI: FBI kwagara Linux na 2002 n'ihi na ọ bụ sistemụ echedoro nwere ike ijikwa ọtụtụ data, ọ na-ejikwa Linux n'ihi na ọ dị mfe nledo na kọmputa ndị ọzọ site na sistemụ arụmọrụ a ma jikwaa netwọk nke nzuzo ozi. "
Ihe ọzọ, iji GNU / Linux iji ledoo kọmputa ndị ọzọ, dị ịtụnanya. Onye dere akụkọ ahụ ahụla ọtụtụ ihe nkiri ndị na-eme ihe nkiri na m hụrụ GNU / Linux na UNIX n'anya, mana ọ bụ iwe na ịhapụ.
ND THE ỌZỌ: Gịnị mere ọ ga-eji ju gị anya na Cuba na-akwado Free Software n'ozuzu yana GNU / Linux ọkachasị?
Ebe ọ bụ na anyị abụọ bi na Cuba na anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi nke obodo SWL obodo, anyị maara na Gọọmentị anaghị eme ihe niile ọ nwere ike ime iji kwado SWL, n'agbanyeghị, na-atụ anya, ọ na-ekwenye na ọ bụghị n'ọtụtụ nzukọ ma ọ bụ bọọdụ ndị isi
O zighi ezi ịsị na Bing na-eji linin dabere na ibe: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.bing.com.
N'ebe ahụ ozi sitere na sava nke Akamai, nke bụ netwọkụ nkesa ọdịnaya kachasị (CDN). Bing na-eji Akamai, mana ezigbo sava Bing na-ezo n'azụ CDN ahụ. Site na ihe m hụrụ na ịntanetị, ihu ihu na-adabere na ASP.Net, ikekwe na Windows.
Mana ị nwere ike ịsị na Akamai na-eji Linux, ya mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke okporo ụzọ Internetntanetị.
Na Argentina, PC ndị gọọmentị na-enye ụmụ akwụkwọ sekọndrị na-eweta Linux distro nke na ọ dị nwute na ọtụtụ anaghị abanye na ndị nkuzi enwechaghị ihe ọmụma banyere usoro a. Ọ bụrụ na pcs bịara naanị linux ọ ga-azọpụta ọtụtụ nde na ụmụ akwụkwọ ga-amụtakwu.
Naanị m gbakwunyere isiokwu gị dịka otu ihe na-ezo aka na edemede m na BULMA:
Ọganihu na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ
Na nkwanye ùgwù niile n'ụwa ... Echere m na ị chefuola otu n'ime ndị nkwalite na ndị ọrụ n'ụwa niile nke Linux na ngwanrọ n'efu: Junta de Extremadura. Dabere na Bill Gates, ọ bụ onye iro ukwu ya n'ụwa niile; Site na nkesa Linex ya, Andalusian Guadalinex malitere n'etiti ndị ọzọ na ebupụla ụdị ahụ n'ọtụtụ mba na Latin America. Ọ bụ onye nhazi nke International Free Software Conference na ọtụtụ oge.
Ndi Cuba juru ya anya site na ojiji nke Gnu / Linux?
Ọ gaghị abụ ihe ijuanya, ebe ọ bụ na ha jiri mmemme ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ, kedu ka ha ga-esi jide n'aka na ha enweghị trojan, azụ ma ọ bụ ụdị ahụhụ kọmputa ọzọ iji ledoo, zuo ozi, bibie ozi, gụnyere ozi, wdg. na a na-eme ha antivirus na ngwaahịa nchekwa ndị ọzọ anaghị achọpụta ha.
Nke ahụ bụ otu n’ime ọtụtụ ihe kpatara m ji eji Gnu / Linux.
Gnu / Linux nọkwa na ndekọ ego ego Carrefour, ahụkwara m ya na ụgbọ elu AirBus A300-200 nke ụlọ ọrụ Avianca, na ndị nyocha ahụ achọtara n'azụ oche ndị njem. Ana m eji Mageia3 na laptọọpụ m, etinyekwara m ya na kọmpụta abụọ ọzọ n'ụlọ, ah !!! nakwa na mbadamba gam akporo, na-eche ka nsụgharị FirefoxOS pụta na mbadamba na / ma ọ bụ Plasma Active (KDE) maka mbadamba.
Agbanyeghị ... Ogologo ndụ! free software !!!
M na-achọkarị ịma banyere Mageia. Kedu ihe distro a na-enye?
akpali nnọọ mmasị na data
Ebuola m ya, ọ na-atọ m ụtọ etu obodo Linux si agagharị
ịgbazinye ego dijo
Ana m eji nwa nkita 😀
Zaghachi iji gbazinye ego
Na enyi m nwanyi Mexico, tupu o jiri xp mana pc ya na enweta AIDS site n'oge ruo n'oge
Ọbụghị naanị na edere akwụkwọ edepụtara na Linux, ị nwere atụmatụ agụmakwụkwọ n'efu 2 n'efu F na A njikwa (Kpamkpam Federal) ebe ị ga-esi mụta GNU / Linux n'etiti ihe ndị ọzọ, ebe ị ga-achọpụta na enwere ụlọ ọrụ nkuzi Ọzụzụ CFP nke Ha na-anwa imechi oghere agụmakwụkwọ nke enyi gị Menem, de la Rua na Alfonsin, tinyere ndị ọzọ (nke steeti na-akwụghị ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ), nke na-eme na ọtụtụ isi ahịhịa dị ka ị maghị itinye ego na agụmakwụkwọ na mba ahụ, ha niile dị oke egwu ma anaghịdị agwa ha, 200 puku ndị toro eto nwere obere ego gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị na atụmatụ ikpeazụ, 700 puku PC na-akwadebe kọmpụta kọmpụta nke ụlọ akwụkwọ kọleji, menu nke ọghọm niile ịchọrọ igosi na South America anyị nwere ụlọ ọrụ ngwanrọ nke toro ọtụtụ n'ime afọ 5 gara aga.
Anaghị m ere enyo ndị nwere agba, mana anaghị m ahụ isi awọ, ahụrụ m obodo m n'anya ma ekwere m na ndị nwere ụbụrụ abụọ na-ekwu okwu nzuzu.
Sergio, injinịa sistemụ arụmọrụ dị mfe (LPI3).
Ndụ Sọftụwia Na-adị Ndụ.
Jhasua War dijo
Banyere. N'ebe a na Venezuela ọ bụ iwu na gọọmentị ọha na eze na-eji sọftụwia n'efu. Na mgbakwunye, gọọmentị na-akwadebe ụmụaka site na nke mbụ ruo na nke asaa site na netbook nke a na-akpọ ebe a «canaimita», nke na-agba na nkesa GNU / Linux dabeere na Debian akpọrọ «Canaima GNU / Linux». Ugbu a, amaghị m ihe kpatara na Venezuela adịghị na ndepụta ndị ahụ.
Zaghachi Jhasua Guerra
Mexico apụtaghị na ndepụta ahụ mana ọ naghị eju m anya, ejirila m Ubuntu kemgbe ọtụtụ afọ ma ọ dị mma
Echere m na A naghị akwado amaokwu ndị a nke ọma, na Venezuela, akụkụ buru ibu nke nchịkwa ọha na eze na-eji GNU / LINUX na ihe karịrị nde kọmputa 2 na Canaima (nke a na-ahụkarị maka agụmakwụkwọ) dị ka sistemụ arụmọrụ ndabere.
Zaghachi Hector Lopez
Obi ụtọ Debian ọrụ
Eude Pereira dijo
Na Venezuela enwere nkesa Canaima dabere na Debian, nke magburu onwe ya n'ụzọ, eji laptọọpụ enyere ụmụ akwụkwọ yana ọmarịcha dị ka sistemụ arụmọrụ maka ọfịs na ụlọ.
Zaghachi Eudes Pereira
Ndewo Eudes, Obi dị m ụtọ na mba gị anaghị amanye Windows dị ka na Chile, nke sitere n'ụlọ akwụkwọ na-egosi ya dị ka "Nna-ukwu na Sir", n'eziokwu ọtụtụ ndị enweghị ọtụtụ echiche nke nhọrọ Linux nyere
Ebee ka isi mmalite nke ihe ọmụma gị dị ???
Ọ ga-amasị m ka emee Ubuntu ma ọ bụ Mint na Venezuela, n'ihi na Debian na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nsogbu, ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị toro eto, ọtụtụ ndị na-atụkwasị obi na Debian anaghị agakarị oke nke na a na-ewepụta ikpe a na ha na-edebe ha ma tinye Windows 7 n'ime ha, ọ bụrụ na ha maara ihe ọ bụla Ubuntu wetara, mgbanwe a agaghị enwe mmetụta dị ukwuu, abụ m onye mmemme na m na-eji Canaima 3.0 na 5.0 ma ana m ahụ ọtụtụ ọdịda na-ekwu na mbipute 3.1 dị mma karịa 4.0, 4.1 na 5.0, n’ihi gịnị? dị mma n'ihi na nsụgharị 4.0 na 4.1 enwere nnukwu ahụhụ na mgbe ị mepere ọtụtụ mmemme nchịkọta menu na windo windo na-apụ n'anya ugbu a wee nwee ịgba ọsọ "gnome-session" iji bidogharịa ihe niile! Ọ bụ ahụhụ Debian dị ka ndị a , ugbu a na mbipute 5.0 ọ bụ otu Debian na desktọọpụ Cinnamon na ọ dị oke arọ! ọ gaghị ekwe omume iji ụdị desktọọpụ ahụ rụọ ọrụ ọ na-ewe iwe! ọ gwụla ma ha gbanwere ya na Nwunye ma kwadoro ya! n'iji Mint ma obu Ubuntu n'onwe ya.
EJI M LINUX M SITE MX
Venezuela nwere iwu maka gọọmentị niile na ụlọ ọrụ ọha na eze na-eji naanị Software efu ma ọ bụ OpenSouce na nyiwe ha. N'ebe a, anyị na-eji GNU / Linux manyere hahahaha
Zaghachi Daniel Gonzalez
Iwu dị, mana ọ dị mwute ikwu na ogo nke ngwa ahụ erughị 10%
Esi hazi laptọọpụ-ọnọdụ-ngwaọrụ
Google na igwe ojii ya na-aga na mbara igwe Debian